Isingzụlite Nchegbu na Nzuzo na Igwefoto Igwe Igwe - OMG Solutions
Isingzụlite Nchebe na Nchebe na Onwe Ya na Igwe Ọdụ Ndị uwe ojii
Enweela ọtụtụ nsogbu bilitere n'oge ndị na-adịbeghị anya banyere ndị uwe ojii na-eyi ihe igwe mmadụ, ọha na eze na-eche na ọ bụ nnukwu mmebi na nzuzo ha na ikike ha nwere na nzuzo. Ọtụtụ ndị enweghị obi ekele maka itinye kamera maka ihe ọ bụla kpatara ya. Nke a na - erute ndị kachasị esighi n'obodo - ụmụaka na ndị nwere nkwarụ. Ndị uwe ojii ga-ekwusi ike na-eyi kamera ahụ iji hụ na arụ ọrụ ha ka mma yana na-ejide ihe ndekọ maka nyocha mechara. Ihe ha kwuru adịghị njọ ma bụrụkwa eziokwu na-ezighi ezi, a na-akpalite ọtụtụ ikpe megide ndị uwe ojii, na-ejikarị ha na-eji ike na-enweghị isi na-emechi onye nkịtị tupu ha ejide ya. Na UK, igwe kwuwapụtawo na ndị uwe ojii na-eji igwefoto arụ ọrụ na-egosi.com yana edere edere edere niile edere na ntanetị. Ihe omume dị ka ndị a emeela ka ọha na eze gharazie ịtụkwasị obi, ọ bụwo nsogbu ikweta na igwefoto ahụ bụ naanị maka ịrụ ọrụ ndị uwe ojii ka mma. Ojiji igwefoto a na-eyi eme bu ihe ogwu, enwere ike ile ya anya inwe mmetuta oma ma elee ya anya site na nnwere onwe. Recordingdekọ oge niile ga-achọ ka ihe niile ndị uwe ojii mee kwa ụbọchị a ga-edekọ ọrụ, nke a ga - enwetakwa ọtụtụ mmadụ, nke a n'onwe ya bụ nnukwu nzuzo nzuzo ma mesịa chọọ ka azịza ya.
Ime ka ndi uwe ojii jiri ngwa odika igwefoto ahu meworo ka ewetala otutu okwu, ihe edeputaghi na nzuzo. Na mba dịka America, ọ bụrụla okwu ebe ọ bụ na ọtụtụ ụmụ amaala maara oke onyunyo gọọmentị nwere ike ịnakọta na teknụzụ a dị ike ma na-eji ekwentị mkpanaka. N'ime ngalaba ndị uwe ojii dị iche, okwu banyere mgbe aga-eme ma ọ bụ ngbanyụ na mgbe ị ga-edekọ ma ọ bụ na ọ bụghị ka ndekọ ahụ aghọọla isiokwu. Onweghị ego ole a ga-eme ka ọhaneze mata ihe niile, enwere okwu gbasara ime ihe ike n’ụlọ yana ọbụna okwu gbasara ndị a na-edina n’ike, ọ dị mkpa ka elebara ya anya nke ọma. A na-akpọ vidiyo ndị dị ka ndị a dịka vidiyo na-ejide ndị mmadụ n'oge kachasị njọ nke ndụ ha. Site n’ebe ahụ, o sighi ike ịghọta mmeghachi omume iwe mgbe a hụrụ vidiyo dịka ndị a na ntanetị, ebe ndị mmadụ nọ gburugburu ụwa nwere ohere ịbanye na ya. Ejirila vidiyo sitere na igwefoto dashboard ndị uwe ojii maka nzube ntụrụndụ, na kamera ndị uwe ojii dashboard anyị na-ahụkarị vidiyo ebe a na-ejide nwanyị gba ọtọ. Edere vidiyo ndị a na YouTube maka ụwa dum ka ha hụ, nke a emeela ka ndị isi bụrụ ndị paparazzi amaghị. Otu onye uwe ojii yiiri kamera nwere ike ime ka ihu ọha gaa n’ihu ụlọ ma ọ bụ n’ime ụlọ ebe ọkpụkpọ kpọrọ ha ka ha dozie okwu n’ụlọ ndị mmadụ.
Na US ọ bụrụla nsogbu pere mpe maka ndị mmanye iwu ịgbabeghị itule; nghọta banyere ndị uwe ojii na nzuzo maka ụmụ amaala. A na-eyi igwefoto ahụ na-eyi ahụ na ebe dị iche iche dịka iko, akwa na ubu. Na ikike ụmụ amaala nke US na ndị na-akwado iwu na-arịọ ndị omebe iwu ya na ndị uwe ojii ka ha leba anya n'ihe egwu dị na nchedo oke yana oke nke ụmụ amaala tupu ha agafe ịbanye ebe niile. Otu ndi otu nwere onwe ha na America eweputala ụfọdụ iwu nke na-eduzi ma na-arịọ ndi na-ese iwu na ndị ọrụ nchekwa ọha ka ha jụọ ndị ga-eji sọmpụta ihu dị oke, ha rịọkwara ka ndị uwe ojii kwụsịrị iji akara igwefoto vidiyo tupu eme mkpebi. Grouptù ọzọ gbaghakwara na ndị uwe ojii ekwesịghị ịbụ naanị ndị uwe ojii kamakwa mgbasa ozi na ọha na eze. Dịka anyị tụlere na mbụ na nke a abụghị ezigbo echiche dị mma n'ihi na ọ na-ekwe ka ejiri ya mee ihe dị ka ndị a maka ebumnuche dịgasị iche, ụfọdụ vidiyo na-echedị ka ahapụ ya n'ihu ọha.
Ọ nwere oge ndị ọrụ gbara ndị uwe ojii ọkụ n'ihi na ha atụgharịghị igwefoto ha na oge dị mkpa na nyocha. N'ebe a na-eji kamera ndị na-eyi uwe, a na-echekarị n'etiti ndị uwe ojii mgbe nnukwu ihe mere na ha enweghị ike idekọ echiche ahụ "a ga-agbagbu gị na-abata n'uche?" Ọ nwere ike bụrụ ihe dị mma maka ngalaba ndị uwe ojii naanị gwa ndị ọrụ ha ka ha dekọba ihe niile ha na-agba akaebe, mana nke a n'onwe ya bụ nnukwu nzọ ụkwụ n'ụzọ adịghị mma. Site na ịdekọ ihe niile na onye ọ bụla, ị nọ n'ihe ize ndụ nke imebi nzuzo nke ụmụ amaala. Ọ bụ enweghị uche na nzuzu ka ịdekọ ajụjụ ọnụ nke ndị mere mpụ ma ọ bụ mgbe ha na-abanye n'ụlọ nkeonwe. Ọnọdụ dịka nke a welitere ajụjụ site n'aka ndị otu nwere onwe ha ma ọ dị mma ịnwe vidiyo nke ndị a metụtara ọhaneze.
Ọtụtụ nwere ike na-ekwu na ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị uwe ojii echefuru ịgbanye kamera ha n’oge ihe dị mkpa, ọ kacha mma na ha ga-etinye ya na oge niile. Enwere ike ịrụ ụka maka nke a nwere ezi uche mana, ruo ụfọdụ ụfọdụ, ọ baghị uru na nsogbu na - abịa.
Onye uwe ojii ahụ kwesiri ka anyị nwee nzuzo nzuzo dịka ya onwe ya bụ mmadụ nwere ikike mmadụ nwere, ọ bụghị igwe ndị emebere ya na ebumnuche. Ọ bụrụ na ha ga-abụ ndị nlekọta nke iwu, mgbe ahụ ọ dị ezigbo mkpa na ha nwere ntụkwasị obi zuru oke iji chedo iwu ma rube isi na ya. Ka o kwesiri, nke a bu ntughari na ntinye a ga-esoriri n’otu n’otu mgbe ichota ihe banyere nsogbu nzuzo. Ọ dị mkpa ịmara na ọbụna ndị ọrụ uwe ojii kwesịrị ịgwa ibe ha okwu na njem na-enweghị atụ na mkparịta ụka ha ga-agbanye na ọha. Ha nwere ikike ịbụ ihe okike ma soro ndị ọrụ ibe ha nwee mkparịta ụka enyi na enyi, gịnị mere ha ga-eji tụọ ụjọ ịnụ ịnụ ha?
O nwere oge ụfọdụ ọbụlagodi ndị uwe ojii na-ekwurita n'etiti ndị na-akọ akụkọ na ndị o metụtara mmeko nwoke na nwanyị, ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi na enweghị ọrụ ọ bụla ime ka ha dekọ akụkọ a. N'ime ọzụzụ a, a na-arịọ ndị mpaghara dịka ndị uwe ojii Rialto ka ha ghara idobe igwefoto ha n'otu oge ahụ.
Okwu abụọ a na-ebute ọtụtụ nchegbu banyere ihe kpatara na ekwesighi idobe igwefoto ahụ niile n'oge a, nke a gụnyere n'oge mgbanwe ha kwesịrị ịbụ nnọkọ ha. Ezigbo iwu eji eyi ya anaghị achọ ka igwe ihe onyonyo dị na oge niile, nke a bụ ihe anaghị anọdụ ala nke ọma ma merie ebumnuche dị na igwefoto eyi ahụ, nke bụ ijide ihe akaebe banyere ihe ndị mere mpụ. N'ihi na ha na-eme onwe ha egwuregwu mgbe niile, ndị isi ga-emecha zụlite omume nke ịgbanahụ cam n'onwe ha maka ebumnuche dịgasị iche. Ndị otu ọhaneze ndị mere ihe na-edoghị anya ọfụma ma ọ bụrụ na ha mere ndị omekome ma ọ bụ ndị akaebe. Mana ọ bụrụ na ụmụ amaala niile nọ na vidiyo ekwenyeghị ịpụta, mgbe ahụ enwere ike ịhapụrụ ya ọha na eze maka ikiri. Banyere mgbe agbanyere igwefoto ahụ, Jay Stanley na ACLU nyere ndụmọdụ dị mma. O siri ọnwụ na ndị uwe ojii ga-eyikwasị kamera ahụ mgbe ha na-aza oku maka ọrụ ma ọ bụ mgbe ndị ọrụ mmanye ọzọ malitere ya ma ọ bụ ọ nwekwara ike bụrụ nnọkọ nyocha n'etiti ndị otu na ndị uwe ojii. Ndị a na-ezute gụnyere:
Ajụjụ ọnụ Consensual
Ndị na-eweta ozi nwere ike ịgụnye iji ike emecha
Mgbe ahapụrụ ndị ọrụ nchekwa n’aka ndị ọrụ, ihe ndekọ ahọpụtara nwere ike bute ebubo ahụ na vidiyo na-eduhie ma ọ bụ na-apụtaghị ihe niile. Enwere ike ịsị na vidiyo dị ka nke a enweghị uche ma ọ bụghị nke ga-emetụta ya nke ọma. Enwere ike ikwu na ejirila vidiyo ahụ mee ihe kpamkpam iji nwetakwa nkwenye. N'aka nke ozo, idekọ egwu oge niile nwekwara ike inwe mmetụta na-ezighi ezi ma gbochie ndị ọrụ uwe ojii ka ha jiri uche ha mee ihe ebe ọ bụ na ha nwere na "A na-elele m ma ọ bụ enwere ike ịtụle vidiyo a mgbe e mesịrị n'uche" ebe ọ bụ na ha na-eyi igwefoto, ha nwere ike iche na ọ dị mkpa. Ighazi banyere okwu ikpe dị obere, ebe ha ga-enwe obi ike karịa na ha ga-enwetacha nsogbu n'ụzọ ahụ. N'iburu n'uche agụụ maka eserese, ọ dị mma ịmara na enwere ihe ọghọm nke vidiyo na-atọpụ, na-apụ apụ ma ọ bụ na-ekerịta nke ọma na nke a ga-abụ mmebi nke nzuzo nzuzo
N’ịgbasapụ iji igwefoto ahụ na-eyi n ’arụ ọrụ dị oke mkpa, ọ dị mkpa na a na-ekwupụta nke ọma igwefoto igwe eji eyi ọfụma n’akụkụ na mmejuputa ya ma ọ bụrụ n’ileghị nke a anya igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike iweta nsogbu ndị ọzọ. na nzuzo na okwu banyere nche. Iwu a ga-agafe kwesịrị ịdị na-echebara onye ọrụ ndị uwe ojii na ndị nkịtị uru.